トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tombontsoa sy ny fatiantoka ny mifidy ambany ny tahan'ny fampiasana pachinko trano izy
Ny fotoana dia namoha ny varavaran'ny trano-pachinko efi-trano, feno latabatra foana, ianao no rattle-panjakana, ary izany foana shop'll fijanonana, Mino aho fa misy olona maro izay tsy mahatsapa ny hira. Toa eny an-dalambe, satria ny fandikan-teny tsy manana, tsy afaka mand? ny mety fa misy zavatra hantsana lalina manjaka faritra toy ny varotra sy ny mpanjifa sy ny asa fanompoana na ny toerana fepetra ,. Raha niresaka ny
ny fatiantoka ny toy izany pachinko efi-trano, koa misy latabatra malalaka, izay table Mino aho fa misy ao ny hoe saro-takarina ny fomba sehatra tsara izany. Raha indeterminate dia mikendry, zava-poana no hitranga, dia ho sarotra ny handresy. Na dia hanangona vaovao, ho an'ny mpitsidika ihany koa ny sparse, fanazavana mahery sarotra koa ny ho avy amin'ny alalan'ny.
miantehitra amin'ny POP sy ny afisy, sns, na dia Semeyo ny modely efa nanisy ny hery, fa ny banga be hijoro, ary hijoro be loatra dia tsy hibebaka izy, ny lalao ny hira na ny Miss, tsy voatery hanome anareo dia ho.
teo, dia hoy ny lehibe indrindra ambany tombon-dahiny ny fivarotana ny vokatra.
Na izany aza, ny soa ho any amin-pachinko efi-trano dia eo. Ny ampahany izay latabatra feno foana, ianao Maeru mba hampitombo ny mety ho handresy ny hanararaotra ny zava-misy. Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ambany famokarana, ka nihazakazaka be tsy haharitra dia lehibe, misy fotoana tsy nampoizina ny hetsika tsindraindray. Tsy ho very ny avo hitoetra ao tsena, na misy ihany koa izay mamokatra ny mipoaka payout.
latabatra no Hodai tianao mifidy, toy ny lalao kely ihany, mpanjifa zatra pachinko be dia, ka dia nanangona avy mahery fironana, raha tsara maso manodidina, matetika koa dia hijanona mpanjifa be loatra fa tsy mba nivily, ianao. Izany aza, raha miezaka ny handresy mba hahazoana antoka toy izany tsena, andro-to-andro fanangonana antontan'isa ho ambony kokoa hitoetra ao fivarotana dia ho manan-danja.
dia Na izany aza, satria dia pachinko efi-trano tsy tsara ny fandidiana, satria sarotra ny mamaky ny onjan-kerisetra hetsika ny isan-. Satria dia ny fandikan-teny izay tsy mihazakazaka, ka mety fa na dia ny toeram-pivarotana tsy tanteraka lafiny tsara tarehy nangonin'ny angona.
avo fiasan'ny Pachinko fivarotana, misy isan-karazany ny tahirin-kevitra tsara manoloana ny fivarotana, fa ny lafiny fivarotana mahasoa ho mazava ho azy, tao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ambany fandidiana, satria ny fandikan-teny izay tsy mandeha, dia azo atao ny miantsena ho an'ny fanangonana antontan'isa bebe kokoa efa lasa toe-javatra sarotra. Ny
fepetra, dia ny toeram-pivarotana koa ny Mpanjifa ihany koa ny tsy hiova be. Fivarotana, na mametraka ny baolina na oviana na oviana, miezaka ny hitandrina iray amin'ireo fahazarana hametraka ny napetraka. Na dia ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ambany fandidiana, dia midika fa azo atao ny mampitombo ny mety ny handresy. Na izany aza, fantsika nanakodia hanenjanany, mametraka fa misy ihany koa ny maro izay rehetra lazaiko 1, koa ho ilaina ny asa tsara.
nailikilik'izy mirona, mihazakazaka ambany fivarotana fa, Avia mba hanova ny fomba fisainany, ka nandresy isan-jato ihany koa ny mety tsy ho nofy. Ireo izay antsoina hoe tsy pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ambany mihazakazaka akaiky, dia mety ho mahaliana try fa na hifaninana amin'ny toeram-pivarotana.
na izany aza, dia ankapobeny dia mitsetsitra ny mamy ranom amin'ny fivarotana ny ambany-miasa mety ho an'ny mpampiasa mandroso. Amin'izao fotoana izao, mahay mandanjalanja bebe kokoa ny tsy fahampian'ny, no nanolorana azy ho hanorina indray ny fifandanjana amin'ny fivarotana miaraka amin'ny mari-pahaizana sasany asa. Mety ho Sha. Amin'izao fotoana izao, mahay mandanjalanja bebe kokoa ny tsy fahampian'ny, no nanolorana azy ho hanorina indray ny fifandanjana amin'ny fivarotana miaraka amin'ny mari-pahaizana sasany asa. Mety ho Sha. Amin'izao fotoana izao, mahay mandanjalanja bebe kokoa ny tsy fahampian'ny, no nanolorana azy ho hanorina indray ny fifandanjana amin'ny fivarotana miaraka amin'ny mari-pahaizana sasany asa.